Bangaladesh Xalaal Bangaladesh - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Islaamka ee Bangladesh
Bangladesh waa ummad u badan Muslimiin islaamkuna waa diinta dawladda Jamhuuriyadda Dadka ee Bangladesh. Dadka muslimiinta ahi waxay ahaayeen ku dhowaad 152 milyan, oo ka dhigaysa 90.39% tirada guud ee dadweynaha marka la eego tirakoobkii 2011 oo Bangladesh ka dhigaysa waddanka saddexaad ee ugu tirada badan muslimiinta adduunka ka dib Indonesia iyo Pakistan. Dadka reer Bangladesh badankood waa Sunni. Waxay raacayaan fiqiga islaamiga ah ee Xanafi, laakiin sidoo kale waxaa jira tiro sii kordheysa oo ah Axaadiista Axle. Diintu had iyo jeer waxay ahayd qayb xoogan oo ka mid ah aqoonsiga Bangladesh, laakiin aqoonsiga gaarka ahi wuu kala duwanaa waqtiyo kala duwan. Bangladesh inkasta oo waddan soo koraya uu ka mid yahay waddammada muslimiinta ah ee ugu tirada yar adduunka.
Qarnigii 9aad, Carabtii Muslimiinta waxay aasaaseen ganacsi iyo sidoo kale xiriiro diimeed oo ka dhex jiray gobolka ka hor intaan la guuleysan, badanaa iyada oo loo marayo gobollada xeebta sida ganacsatada iyo ugu horreyntii iyada oo loo marayo dekedaha Chittagong. Socdaalka carabta ee gobolka wuxuu ahaa natiijada xukunkii muslimiinta ee Indus delta. Kadib guushii Muxammad bin Bakhtiyar Khalji iyo aasaaskii Delhi Saldanada, adeegayaasha islaamiga ah ee Hindiya waxay gaareen guushoodii ugu weyneyd marka loo eego dawah guuleystay iyo tirada dadka ku soo islaamay magaalada Bengal. Shah Jalal waxaa loo haystaa inuu ku faafiyay diinta Islaamka waqooyi-bari Bengal iyo Assam bilowgii qarnigii 12-aad. Saldanada islaamiga ah ee Bengal, oo ah ummad ganacsi weyn ku leh adduunka, waxaa aasaasay Shamsuddin Ilyas Shah ka dib markii ay ka xoroobeen boqortooyadii Tughlaq. Intaa ka dib, Bengal waxaa qabsaday Babur, oo ahaa aasaasihii mid ka mid ah boqortooyooyinkii baaruudda, laakiin sidoo kale waxaa muddo kooban qabsaday Boqortooyadii Suri.
Wacdinta Akbar kii weynaa ee sincretic Din-i Ilahi, waxaa lagu sifeeyey cayda Qaadi ee Bengal, oo sababay khilaafaadyo waaweyn Koonfurta Aasiya. Qarnigii 17aad, markii uu xukunka hayey Mughal Emperor Aurangzeb ee ku saleysnaa shareecada Islaamka, Bengal Subah, oo sidoo kale loo yaqaan Jannada Ummadaha, wuxuu ka qiimo badnaa in ka badan 12% ee GDP-ga adduunka iyo mid ka mid ah awoodda wax soo saar ee adduunka hoggaamineysa, oo ay ka timid Bariga Holland Hindiya Shirkadda si weyn ayaa looga faa'iideystay. Fikradaha dhaqaalaha islaamiga ah ee laga helay Fataawa-e-Alamgiri waxay si toos ah wax ugu kordhisay dhaqaalaha Bengaal, waxaana la muujiyay calaamadeynta warshadaha.
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Bangladesh